Areka Yakarasika: Ndeipi kirasi yakanyanya kunaka? - Game poindi - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | February 12, 2022 | nhau, Mazano emutambo, Vhidhiyo mitambo
Kutsvaga yakanakisa kirasi muYarasika Areka rave iro basa remutambo wega wega kubva pakatangwa. Chero zvazvingava, kusarudzwa kwakawanda uye panofanira kunge kune chimwe chinhu kune kuravira kwega kwega: mutsigiri, martial arts, DD yekutanga, nyanzvi yekureba - hapachina yekutamba muAreka Yakarasika isingagone kuitwa mukubatanidzwa kwekirasi, kirasi uye kirasi. hunyanzvi point kugovera. Saka ndeipi kirasi yaunofanira kusarudza muYarasika Areka?
With the Kutanga, vatambi vanodirana kumaseva muhuwandu hukuru. Uye sezvazvinowanzoitika nemitambo yemavhidhiyo ine kirasi uye hunyanzvi sisitimu, mubvunzo wekutanga kune vazhinji vateveri ndewekuti nderipi kirasi yakanyanya kunaka. Smilegate RPG, Tripod Studios uye Mitambo yeAmazon haisiye vatambi vari voga pavanenge vachiita sarudzo yavo: Dandemutande rewebhu graphic rinoratidza kuti makirasi anoenderana sei. Kunyanya kunaka kukuvadza mutengesi? Kunyanya agile? kutsungirira? Kana kuti muponesi? Zvirinani, zvinopa zano rekuti ndeipi kirasi inogona kunyatsoenderana neyako yaunofarira playstyle.
Areka Yakarasika. Makirasi ose uye simba rawo
MuAreka Yakarasika, kusarudzwa kwekirasi kwakakamurwa kuita zvakakosha uye madiki. Yega yega base kirasi ine akati wandei ma subtypes akasiyana chaizvo. Mamwe acho anewo maitiro echikadzi, chiri zvakare chimwe chinhu chekutarisisa kana uchisarudza makirasi akanakisa muAkarasika Areka. Mutambo uyu unoita kuti vateveri vaedze madiki madiki zvakanyanya - sarudzo yekupedzisira isati yaitwa.
munhu hunyengeri hunorumbidzwa hwevagadziri, iyo inogona kuchengetedza vatambi vakawanda kubva mukukanganisa. Chaizvoizvo, Areka Yakarasika inotsamira pane inofananidzira twink-inoshamwaridzika sisitimu: Kune akawanda akaunganidzwa anoshanda kuchikwata chese, kureva mavara ese paseva. Iko kufambira mberi hakuna kungobatanidzwa chete kune chimiro, asi kune rosi. Uye kufambira mberi kune zvishoma. Saka kana iwe wapedza zviwanikwa zvese zvekufambira mberi kwePvE yako nehunhu, unogona kuenderera mberi nekutamba nemumwe wevamwe vatambi vako kwevhiki rese. Izvi hazvifanirwe, asi ipfungwa yakanaka nehurongwa hwakaunzwa muAreka Yakarasika. Chero zvazvingaitika, mutambo hauna kugadzirwa kune yakajairwa-unhu mutemo, asi zvinokukurudzira kuti ubate neyechipiri kana yechitatu mavara.
Sarudzo yekirasi muAreka Yakarasika ichiri yakakosha, kunyangwe isinganyanyi kukosha pane mamwe maMMORPG. Izvo zvirimo zvakakamurwa kuita matatu "tier", iyo chinhu chikamu chemutambi chinotarisa kuti ndeipi tier yaunogona kutamba mairi.
Chaizvoizvo kune varwi, martial artists, pfuti, mages uye mhondi - imwe neimwe yeaya makirasi ekutanga inozokamurwa kuita hunyanzvi hunotaridza playstyle uye hunyanzvi hwakaiswa. Muchidimbu, kirasi yega yega inobatsira uye inogamuchirwa mukupambwa, asi makirasi maviri ane akajairika "nzvimbo dzenguva dzose" uye anogara akaiswa: bard uye paladin. Ose ari maviri makirasi anodiwa ekutsigira muAreka Yakarasika yausingade kuita kunze kwekupambwa.
Nekudaro, makirasi ari muAreka Yakarasika haagone kuita pasina chinzvimbo maererano nekubatsira kwawo, mamwe anongo shanda kupfuura mamwe:
The warrior base class chimwe chinhu chemhando yepamusoro pakati pemakirasi eLost Ark. Zvese ndezvekurova, zvinokatyamadza, kana kusunga vanopikisa mukurwa kwemelee. Iyo yekutanga kirasi yakakamurwa kuita matatu madiki: Berserker, Paladin uye Pistol Lancer.
Iine greatsword yake, iyo Berserker ndeyese-inotenderedza maererano nekurwisa uye kudzivirira. Yayo inokurumidza kurwa animations ine kukuvara kwakanaka inofananidzwa nedziviriro yakanaka. Pamusoro pezvo, Berserker ane zvinobatsira kuboka: Anogona kuzvibata iye nenhengo dzechikwata chake uye kubatsira boka kuti rifambe nekukurumidza panguva idzi dzekuputika.
Iyo Paladin ndeimwe yemakirasi akaiswa muYarasika Areka. Hondo yeChiedza inogadzikwa serutsigiro mukupambwa kwese - vatambi havafanirwe kunetseka nezve kutora chikamu mukupambwa nemunhu uyu. Akashongedzerwa nebakatwa nenhoo, paladin anosungira vanopikisa kwaari uye anopisa mashiripiti emwenje anoshanda munzeve dzavo. Iyo paladin inogona kuzvidzivirira iye nenhengo dzebato rake. Panguva imwecheteyo, kukanganisa hakufaniri kusekwa. Simba guru, zvisinei, kudzivirirwa kunenge kusingapindiki.
Kunyangwe kana isingaite senge, iyo Pistollance ndiyo tangi pakati pemakirasi evarwi. Anotora kukuvara uye anogona kudzivirira nhengo dzebato rake. Mukuwedzera, iwe unogona kuishandisa kukwezva vanopikisa uye nekudaro uvachengetedze kure nevaunoshanda navo. Inofananidzwa nepistol lancer nerufu knight muWorld of Warcraft.
Martial Artist (Melee)
Mutambi wetsiva ndiye nyanzvi yehondo muLost Ark. Ivo vanoenda vakananga muhondo yemelee uye vanotora vavengi ikoko nemhando dzakasiyana dzezvombo, kusanganisira chibhakera. Martial artists ane nhare uye dzimwe nguva anobvisa kukuvara kwakanyanya.
Iyo Hondo Monk ndiye ega murume wetsiva nyanzvi. Anorova nezvombo zvechibhakera uye anotamba zvakafanana naMonk muDiablo 3. Anokurumidza kuvhara madaro mapfupi kune vanopikisa uye ipapo kunaya pamusoro pavo neanorova combos. Nehumwe hunyanzvi, iyo Hondo Monk inogona kuchengeta zvikara mumhepo uye nekudaro zvinovashamisa. Nzira yekurwa inokurumidza.
Iyo Hondo Dancer yakafanana neHondo Monk: Iye zvakare anokurumidza uye anomhanya, anokurumidza kukunda madaro kune vanopikisa uye anoita kunze zvine simba. Kunyanya nekurwiswa kunoparadzirwa kana kusimudzirwa nemamiriro ekunze. Murwi wehondo haangorove vavengi, anozviputira.
Kirasi ye "Scrapper" (zvakare yechikadzi) inoshanda semumongi wekurwa kana mutambi wehondo, asi inoshanda nehunyengeri hwekutamba: Zvakakosha kuenzanisa zviwanikwa zviviri zvakasiyana - sezvaunozviziva kubva pachiyero druid muWorld of Warcraft, semuenzaniso kugona. Zvese zviri zviviri zviwanikwa zvinoda kudzikamiswa kuti zviregedze macombos uye zvirambe zvichishanda. Resource management inodiwa pano kuti scrapper irege kupera mweya mukurwa.
Nechibhakera chemweya, zita rinotaura zvese. Ikirasi yemelee, asi inovimba nekurwiswa kwemelee uye kurwiswa kubva kure. Kirasi iyi nokudaro inosiyana zvakanyanya kubva kune mamwe matatu madiki. Pfungwa imwe inoramba yakafanana: uchishandisa ma combos ane simba, unogona kubata zvakanyanya kukuvadza uye chiteshi simba rinowedzera hunyanzvi kana rubatsiro mukurwa.
Iwo pfuti makirasi echinyakare ekurwisa kureba, asi vanoshandisa zvombo zvakasiyana. Vese inyanzvi kana zvasvika pakubvisa kukuvara kwakanyanya. Kana zvichibvira, haufanirwe kumira mumharaunda yevavengi kwenguva yakareba, asi gara uchifamba.
Mucherechedzi ikirasi inofambiswa zvikuru ine pfuti nhatu uye anogona uye anofanira kuchinja pakati pepfuti yake zvichienderana nemamiriro ezvinhu. Pistols, pfuti uye pfuti imwe neimwe ine akasiyana kukuvara kukosha uye mazinga. Pakupedzisira, kusarudzwa kwezvombo zvakakodzera kunosarudza kubudirira kana kukundikana muhondo.
Mucherechedzo akafanana neanomaka: Iye zvakare ane zvombo zvako zvitatu, izvo zvinogona kuchinjika kunze zvakanaka muhondo naX uye Y. Agile, the Marksman anofamba mu "kuyerera" achiyambuka nhandare yehondo achipfura pfuti nemagirinedhi kuvavengi.
Iyo artilleryman yakaoma uye yakanyanya kuderera mbozha pane imwe nyanzvi yepfuti. Icho chimwe chinhu chetangi yemakirasi akapatsanurwa: Haagone kuchinjika, asi anoparadza. Anotsiva kushayikwa kwake kwehunyanzvi nekuwedzera kusimba. Anoshandisa kanoni hombe inogona kuburitsa kana kutsemura vanopikisa mukuwanda.
Iyo sniper inofarira kushanda iri chinhambwe uye ine hurefu hwakareba hwemakirasi ese epfuti. Kana vavengi vakanyanya kuswedera pedyo naye, anogona kusunda shure kuti apfure asina kuvhiringidzwa. Mamwe emano ake anotomutsa mhedzisiro yekubira.
Iwo mages haatore vasungwa: ivo vatenzi vekukuvadza kukuru kwavanoita nehunyanzvi hwekutanga. Chimwe chinhu chakasiyana ndeye bard, uyo asingangokonzeri kukanganisa, asiwo kuporesa.
Sekirasi yekutsigira, bard - senge paladin - ine nzvimbo yekusingaperi mukupambwa kwese. Iko kukosha kwakawedzerwa kwebhadhi kunonyanya kukosha. Iwe unofanirwa kuita pasina kudzivirira uye hukuru hukuru, asi bard inoporesa, inogovera nhovo uye inosimbisa. Kukuvadzwa kwese hakufanirwe kushorwa - kunyangwe vatambi vega vanogona kuzvibata pasina matambudziko.
Muroyi ndeyekirasi: anosarudza kushandisa zvinhu zvake zvitatu kurova vanopikisa kumeso semhedzisiro yenzvimbo. Kukuvara kwakakura uye kwakapatsanurwa pakati pechipfuva nekukuvadzwa nekufamba kwenguva (DoT). Anokwanisawo kudzora mapoka evavengi, semuenzaniso nemazaya echando anonotsa monsters. Izvi zvakakosha, nekuti vanopikisa havafanire kuswedera pedyo nemuroyi.
Mhondi dzakachena melee varwi vanokuvadza vanopikisa nezvombo zvakapfava uye vanobata kumwe kukuvadza nemashiripiti erima. Pano, zvakare, Smilegate RPG yakateedzera kubva kuWorld of Warcraft.
Muvhimi wemumvuri anoenderana nepfungwa yemuvhimi wedhimoni kubva kuWorld of Warcraft. Nemapatya glaives, anotarisana nevanopikisa muhondo - uye, zvinoshamisa sei, anogona kushandura kwenguva dhimoni kubata kukuvara kwakawedzera. Pakazara, zvisinei, kufanana kunongori dzidziso, sezvo yekutanga playstyle yakasiyana zvachose.
Iyo Deathblade inofamba zvakanyanya uye inofarira kuita kubva pamutsetse wechipiri wevarwi vemelee. Kubva ipapo anogona kugadzirira kombi dzinoparadza neminondo yake. Iyo blade yerufu inonetsa kutamba. Zvinotora nguva kuti ugone, asi kana waita, kukuvadza kunobuda kwakakura.
Areka Yakarasika: Mudzidzi Starter Pack* 19,99 EUR tenga
Areka Yakarasika: Explorer Starter Pack* 34,99 EUR tenga
Areka Yakarasika: Annihilator Starter Pack* 64,99 EUR tenga
Kare Areka Yakarasika: Nyowani MMO inotyora marekodhi - maseva online!
Inotevera Areka Yakarasika: Nhamba dzevatambi dziri kukwira mudenga
Kickstarter kadhi mutambo Miswe Yekupesana: imbwa nekatsi
Aliens Isolation: Horror mutambo munguva pfupi iri kutevera kune iyo smartphone
Link's Awakening yeNintendo Shandura: New Zelda ndeyekare
Kutenga chiitiko hakuna kukwana: vatengesi vematoyi vari kurwara neCorona